Vaovao - Ny peta-kofehy dia teny ankapobeny amin'ny lamina haingon-trano voaravaka amin'ny lamba misy fanjaitra sy kofehy.
Vokatra mivarotra mafana
Kitapo fanaovana amboradara
Drafitra an-trano diamondra
Fitaovana fanaovana amboradara
Ny peta-kofehy dia teny ankapobeny amin'ny lamina haingon-trano voaravaka amin'ny lamba misy fanjaitra sy kofehy.
Ny peta-kofehy dia teny ankapobeny amin'ny lamina haingon-trano voaravaka amin'ny lamba misy fanjaitra sy kofehy. Misy karazany roa ny amboradara: peta-kofehy landy sy kofehy volom-borona. Ny landy na kofehy na kofehy hafa dia voatsindroky ny fanjaitra miaraka amina endrika sy loko manokana amin'ny peta-kofehy ary ny loko dia voatsindroky ny fanjaitra handrafitra endrika haingo. Izy io dia ny fahaizana manampy ny famolavolana ny olombelona sy ny famokarana ny lamba efa misy mampiasa fanjaitra sy kofehy. Ny peta-kofehy, izay manana tantara roa, na roa arivo na telo arivo taona farafahakeliny, dia iray amin'ny asa-tanana nentim-paharazana sinoa.
Ny amboradara ataonay dia mampiasa zavamaniry, voninkazo ary sarimiaina sariitatra namboarina tamin'ny rindrina telo habe mihantona, saron-ondana, fitaratra, kitapom-batsy, fehiloha, rojo, kavina, kavina, talisianina 、 saron-tava, mosara, sns., Ny amboradara dia karazana mampisy ny Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Ny antsipirian'ny fiasan'ny amboradara tsara, manasongadina hatsarana miavaka.
Ny peta-kofehy dia manana fahasalamana ara-panahy, tsiro amin'ny fiainana, loko tsotra sy mirindra, tsy fisian'ny toerana an-tsaina tsy misy farany. Ny peta-kofehy dia ny feon'ny fitiavana, ny resaka malefaka fanjaitra sy kofehy, ny lamba banga dia omena aingam-panahy, ny sary an-tsaina manankarena sy tsara tarehy dia miravaka ny fiainana monotonous, ary manangana tontolo nofinofy sy fotoana poetika. Ny fonosana ara-nofo dia misy lamba vita amboradara vita printy, kofehy vita amboradara, fanjaitra amboradara, torolàlana momba ny sary amin'ny antsipiriany. Ny vokatra dia tsy vita, mila atao amin'ny tanana, mety ho an'ny vao manomboka, ny namana izay milalao fanjaitra sy kofehy voalohany, aza manahy, ny vokatra amboradara dia miaraka amina tutorial feno famaritana amin'ny antsipiriany momba ny horonan-tsary, araho ny horonan-tsary azo vitaina, avelao ianao sy ny peta-kofehy aotra fifandraisana lavitra. "Ity tontolo ity dia tsy tsy fahampian'ny hatsaran-tarehy, tsy fahitana maso fotsiny hahitana hatsaran-tarehy", zavatra tsotra marobe, tsy raharahan'ny fo be atao foana.
Angamba tsy tsara daholo ny fiainana, fa raha mbola misy ny fitiavana ny fiainana, faly mamorona fo tsara tarehy, avy eo miadana dia ho tonga amin'izay irinao ny fiainana. Raha mbola ny fo, ny zavatra tsotra dia mety hanjary tsy manam-paharoa ihany koa, raha mbola vonona ny hanana fo, fiainana tsotra dia homena ny dikany miavaka!
Fotoana fandefasana: Aug-03-2020
Adiresy: No. 11, Hanxiao Road, Fotang Town, Yiwu City, Faritanin'i Zhejiang, Sina